संविधान दिवसः राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको गरिमा बढ्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना «
संविधान दिवसः राष्ट्रियसभामा वरिष्ठ नेताहरु आउनाले यसको गरिमा बढ्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार १२:३०
मुलुकको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कानून तर्जुमा र कार्यपालिकालाई नीतिगत निर्देशनका लागि सङ्घीय संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको आफ्नै विशिष्ट महत्व र परिचय रहेको छ । संविधान कार्यान्वनकै क्रममा पहिलोपटक भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी .(नेकपा) अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सभाका अध्यक्षमा निर्वाचित गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संविधानका सबै उद्देश्यप्राप्तिका लागि आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो आवश्यकता ठान्नुहुन्छ । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँसँग गण्डकी प्रदेशका पर्वत, बाग्लुङ र मुस्ताङ जिल्लामा राजनीतिक नेतृत्व तथा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा जनप्रतिनिधिका रुपमा नेतृत्व गरेकोसमेत अनुभव छ । पाँचौ संविधान दिवसका सन्दर्भमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवालले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश ः
राससः राष्ट्रियसभाले हालसम्म पारित गरेका कानून, प्रतिनिधिसभा तथा सरकारसँगका समन्वय, निर्देशनका मुख्य पक्षहरु उल्लेख गर्नुपर्दा…?
राससः राष्ट्रियसभाको संवैधानिक व्यवस्था, यसको गरिमा र महत्व अझै बढाउन के गर्नुपर्ला ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा पराजित केही नेताहरु अर्काे प्रक्रियाबाट यस सभामा आउनुभएको छ, यसबारे विभिन्न टिप्पणी पनि भएका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया…?
राससः संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख मुलुक निर्माणमा हामी अगाडि बढेका छौँ त ? सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि के के कुरामा सुधार गर्नुपर्ला?
महामारीका चौतर्फी नकारात्मक असरका बीच हाम्रा गन्तव्यहरु सही दिशातर्फ छन् । यो सरकार पाँचवर्षे स्थिर सरकारका रुपमा अघि बढेको छ । विगतमा कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल नरहेकाले विकासनिर्माणले गति लिन सकेनन् । स्थिर सरकार नहुँदा जसअपजस कसले लिने, जनताले मूल्याङ्कन के आधारमा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । यो स्थिरताले भविष्य राम्रो देखिएको छ र मुलुकले नयाँ गति लिनेछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासमा पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संविधाकोे मर्म त्यही हो । जनतालाई परिणाम दिने तथा बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एक प्रकारको हुटहुटी देखिन्छ, सबै मन्त्रीमा त्यही गति आवश्यक छ । साँच्चै समाजवादमा जान सक्ने आधार तय गर्नुपर्छ । देश समृद्ध नभएसम नागरिक खुशी हुन सक्दैनन् । समृद्धि हासिल गरेर जनतामा विनाभेदभाव त्यसका लाभहरु न्यायोचितरुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । हामी दोहोरो अङ्कको आथिक वृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेका बेला कोरोना स’ङ्कटबाट तङ्ग्रिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
अध्यक्षः कोरोना जोखिमकै कारण अहिले हामीले समितिका बैठकहरु गरिरहेका छैनौँ । मुख्य कुरा महामारीविरुद्ध जनचेतना जगाउने कुरा हो । यसमा विभिन्न सरकारलाई प्रभावकारी कामका लागि घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको बजेट पनि कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । महामारीका कारण बेरोजगारी सिर्जना भएको छ । गरिखानेहरुको अवसरहरु गुमेको छ । त्यसलाई कसरी समेटेर जाने भन्ने नयाँ शिराबाट चिन्तन गर्नुपर्छ । अहिले जसरी कृषिलाई प्राथमिकता दिने चलन शुरु भएको छ, यसलाई दिगोरुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । नराम्ररी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, यी सबै सवालमा हामी समन्वय गर्नेछौँ । हिउँदे अधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्थिति अलि सहज भएमा विद्यमान आर्थिक स’ङ्कटबाट माथि उठ्नका लागि हामीले थप के भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यो खेल्नेछौँ ।
त्यसैले म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन उत्साहका साथ संविधान जारी गरेका थियौँ र कार्यान्वयनमा अघि बढेका थियौँ, हाल आएर कोभिड –१९ ले तबाह गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पालना गरेर हामी जनजीवनलाई सामान्य बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यो सरकारले मात्रै गर्ने काम हो भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । हामी यसतर्फ पूरा गर्न लागौँ । प्रत्येकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर न्याय र समामतामूलक समाजवादको हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नु संविधान र नेपाली जनताको अभीष्ट हो । रासस